Degmooyinka dalka oo qorsheeynaya ineey dhisaan iskuullaad cusub | Somaliska
Degmooyinka dalka oo qorsheeynaya ineey dhisaan iskuullaad cusub
Guud ahaan dalka Iswiidhan ayaa waxaa kor u kac ku yimid tirradda carruuraha dugsiyada hoose lugu wado ineey bilaabaan. Tanina waa mid qasab ka dhigeeysa in degmooyinka dalka ay dhisaan iskuulo cusub oo dabooli doona baahida goobo wax barasho oo ardeyda wada qaada.
“Horey looma arag kor u kac baaxadaas leh oo la xiriirta ardeyda da’aaddaas ah, waana tirradii ugu badneyd tan iyo sanadihii 1900-aad” sidaana waxaa yiri Anders Rubin oo ah madaxa hey’ad dugsiyada hoose u qaabilsan gobolkaMalmö ee koonfurta Iswiidhan oo u waramayey raadiyo Iswiidhan.
Dhinaca kale hey’adda tirro koobka dalkaan Iswiidhan ayaa daboolka ka qaaday in qiyaas ahaan dad gaaraya hal malyan oo ruux ay 10-ka sanno ee soo socda ku siyaasaadaan bulshadda reer Iswiidhan. Hey’adda ayaa sidoo kale sheegtay in tiradda dadkaaasi badankoodu kuwa dhallaan ah oo u baahan xarrummo waxbarasho, islamarkaasina keentay in ay si xoog leh u kordhaan baahida loo qabo dugsiyadda hoose/dhexe iyo xanaanadda carruurta.
Magaalooyin badan oo dalka ku yaala ayaa la saadaalinayaa in sanooyinka soo socda uu kor u kac ku yimaado ardeyda suganeeysa dugsiyadda hoose/dhexe. Iyadoo Malmö boqolkiiba lixdan lugu wado in ay kor u kacaan ardeyda suganeysa bilaabista dugsiyada hoose/dhexe ee magaaladaasi.
Halka magaaladda caasimadda ah ee Stockholm iyana ardeyda dugsiyada hoose dhigata la qiyaasayo in ay kor u kacaan 95 000 oo imminka ku jira dugsiyadda magaaladaasi, sidoo kalena sanadka 2024-ka marka la gaaro ardeydaasi tira ahaan ay gaari doonaan 120 000 oo ardey. Tobanka sanno ee socda ayaa sidoo kale Magaalada Umeå ee waqooyiga Iswiidhan la filayaa in ardeyda dugsiyada sare dhigata ay kor u kici doonaan saddex jibbaar. ugu dambeeyntiina magaaladda Göeborg, waxaa gobolku qorsheynayaa in sanadka 2019-ka la bilaabayo dhismaha soddon kun oo cusub kuwaas oo la runsan yahay in ay dabooli doonaan.
“Tan iyo inta laga gaarayo sanadka 2020-ka, waxaa iskuuladda degmada Göteborg ku soo siyaadi doona qiyaastii 6000 oo carruurood oo cusub, taasi macneheedu waxa weeye in ardeydaas loo sii diyaarinayo boosaskii ay wax ku baran lahaayeen,” ayuu yiri Johan Nyström oo ka tirsan hey’adda gobolka u qaabilsan dhanka qorsheynta.